पत्र-पत्रीका - Sitalpati News
निर्मला पन्तको पोस्टरः जति च्यातो, उति भाइरल !
शीतलपाटीन्युज डटकम। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको स्केचसहितको पोस्टर छ्यापछ्याप्ती देखिए –१३ गते बिहान राजधानीका मुख्य चोकहरुमा । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ । पोस्टरमा उनको स्केच मात्रै थिएन, ‘सरकार भेटियो न्याय भेटिएन’ र ‘ह्यासट्याग इम्प्युनिटी, जस्टिस डिलेड...
सुरक्षा निकायको पोशाकाको खरिदमा अनियमितता
शीतलपाटीन्युज डटकम। सुरक्षा निकायको पोशाकाको खरिदमा अनियमितता भेटिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको छ । महालेखाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सश्स्त्र प्रहरीबलको लत्ताकपडा खरिद अपारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भेटिएपछि छानबिन सुरु गरेको हो । आव २०७४÷०७५, २०७३र...
जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा राष्ट्रपति किन ?
शीतलपाटीन्युज डटकम। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको २४ औँ सम्मेलनमा भाग लिन पोल्याण्ड पुगेकी छिन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।दक्षिण एसियाली मुलुकबाट उक्त सम्मेलनमा भाग लिने भण्डारी एक मात्र राष्ट्रप्रमुख हुन् । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनक...
निगमलाई दैनिक चार करोड नाफा, तर इन्धनको मूल्य घट्यो २ रुपैयाँ मात्र किन ?
शीतलपाटीन्युज डटकम। १५ दिनका लागि साढे ५६ करोड नाफा सुनिश्चित गरेर नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर समान दुई रुपैयाँ घटाएको छ । सोमबार रातिदेखि लागू हुने गरी भएको समायोजनसँगै पेट्रोल एक सय १२ तथा डिजेल र मट्टीतेल ९९ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ । दुई रुपैयाँ घटाएर...
मन्त्तिपरिषद्को पुर्वस्वीकृतिबेगर युपीएफ अवार्ड लिदै ओली
शीतलपाटीन्युज डटकम। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवादास्पद संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपीएफ)को अवार्ड मन्त्तिपरिषद्को पुर्वस्वीकृतिबेगर लिएको खुलेको छ । संविधान, सुशान ऐन तथा नियमावली र विभुषण नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसहित सार्वजनिक पदका व्यक्तिले विदेशी पुरुस्कार, उपाधि वा विभुषण लिँदा म...
मलेसियाको रोजगारी खुल्न नसक्नुको कारण यस्तो
शीतलपाटीन्युज डटकम। श्रम समझदारी भएको एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि मलेसियाको रोजगारी खुल्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण हो — ‘जुँगाको लडाइँ।’कामदार निःशुल्क पठाउने समझदारी गरेका मन्त्री गोकर्ण विष्टबाट अवसरको फाइदा लिन केही व्यवसायीले चलखेलसमेत सुरु गरेका छन्। ‘कारबाही गरेका&...
लाइसेन्स आवेदन खुला गरेकै दिन यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर ह्याङ
शीतलपाटीन्युज डटकम। यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर ह्याङ हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । विभागले एक महिनापछि सञ्चालनमा ल्याएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को आवेदन खुला गरेकै दिन सर्भरले धान्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । चाडपर्वका कारण एक...
क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्थाको समिटमा शिर्ष नेताहरुको संलग्नताप्रति नेकपामा तीव्र असन्तुष्टि
शीतलपाटीन्युज डटकम। विवादास्पद क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था (युनिभर्सल पिस फेडेरेसन) ले आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार र पार्टीका शीर्ष नेताहरुको संलग्नताप्रति सत्तारुढ नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । विवादित धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा सरका...
अब डिस्को-बार दोहोरीमा जानेले उमेर खुल्ने कागजात बोक्नुपर्ने
शीतलपाटीन्युज डटकम। प्रहरीले १८ बर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई केही मनोरञ्जनस्थल प्रवेशमा कडाई गर्ने भएको छ । प्रहरीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ लार्य कडाईका साथ लागु गर्न थालेपछि कामठाडौंका मनोरञ्जनस्थल डिस्को, पव, दोहोरी साँझ, लाउन्ज बार मा १८ बर्ष भन्दा कम उमेरकाले प्रवेश गर्न नपाउने भएक...
अटेरीसामु सरकार ‘लाचार’ !
शीतलपाटीन्युज डटकम। निर्माणका ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीले राजधानीबाट मध्यपूर्वका तीन जिल्ला जोड्ने खाडीचौर–चरिकोट सडक अलपत्र परेपछि गत भदौ दोस्रो साता दोलखा सदरमुकाम चरिकोट आएर प्रदेश ३ सरकारका तीन मन्त्रीले लापरबाही गर्ने ठेकेदार, दोलखा र सिन्धुपाल्चोककका जनप्रतिनिधि साथै दुवै जिल्लाको...
शीतलपाटीन्युज डटकम। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि १८ करोडको गाडी खरिद गर्ने निर्णयसम्बन्धी प्रचारको खण्डन गरेका छन् । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको नाम नलिइकनै उ...
युरोपेली भुमिमा नेपाली विमानलाई उडाउन प्रतिबन्ध
शीतलपाटीन्युज डटकम। नेपाली विमानलाई आफ्नो भुमिमा उड्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी कालोसुचीमा राखेको युरोपियन युनियन (ईयु)ले त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । (ईयु)को हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६ / ६ महिनामा हुने बैठकले कालोसुचीमा राख्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो । ईयुले सन् २०१३ देखि...
भक्तपुर र काभ्रेको मुख्य नाकामा सुरुङमार्ग बनाउन जापान सहमत
शीतलपाटीन्युज डटकम। दैनिक रुपमा बढ्दो सडक जाम कम गर्न भक्तपुर र काभ्रेको मुख्य नाकामा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न जापान सरकार सहमत भएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले जापान भ्रमणका क्रममा कोटेश्वर जडीबुटी सुरुङमार्ग र सूर्यविनायक– धुलिखेल छ लेन सडकको...
बंगलादेशमा कालो सूचीका ३७ मेडिकल कलेजमा ६ सय नेपाली विद्यार्थी
शीतलपाटीन्युज डटकम। बंगलादेशमा कालो सूचीमा परेका ३७ मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरिरहेका ६ सयभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले त्यस्ता कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले मुलुकमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न अनुमति नपाउने स्थिति आउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । आ...
‘तानाशाही सरकारको अगाडि प्रतिपक्षी रुझेको बिरालो’
शीतलपाटीन्युज डटकम। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेलले नेकपाको बहुमतको सरकारले नौ महिनामा महँगी, करको भार र असुरक्षा उपहार दिएको टिप्पणी गरेका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । उनले दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार अभिषाप सावित भएको बताए । पार्टीको केन्द्रीय बैठकमा लागि ब...
दुई सन्तानकी आमा तीन दिनदेखि बेपत्ता
शीतलपाटीन्युज डटकम। दोलखा बिगु २ आरोङकी ३० बर्षीया सुष्मा तामाङ तीन दिनदेखि बेपत्ता भएकी छिन् । परिवारका सदस्यका अनुसार उनी विहीबारदेखि बेपत्ता भएकी हुन् । आरोङस्थित माईती गएर चरिकोटस्थित डेरा आईपुगेकी उनी एकाएक सम्पर्कविहीन भएको परिवारका सदस्य हेमा लामाले बताईन् । माईतीबाट चरिको...
हरेक पाँच बर्षमा डाक्टरको परीक्षा, पर्याप्त नम्बर नल्याए लाईसेन्स खारेज
शीतलपाटीन्युज डटकम। डाक्टरहरुको स्वास्थ्य सेवामा चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेपछि हरेक पाँच बर्षमा उनीहरुको परीक्षा हुने भएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकको क्षमता बृद्धिका लागि भन्दै मेडिकल काउन्सिलले पाँच—पाँच बर्षमा परीक्षा लिन लागेको हो । यसअघि एकपटक लाईसेन्स पाएपछि...
निर्मलाको हत्यापछि त्रासले उखुबारी छेउबाट हिँड्न छाडे छात्रा
शीतलपाटीन्युज डटकम। कक्षा ९ मा पढ्ने लक्ष्मी बडू काठको जीर्ण पुल तरेपछि उखुबारीछेउ खोलाकिनारको पक्की सडक भएर विद्यालय जान्थिन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।उनी कहिलेकाहीँ भाइलाई पनि नकुरेर निर्धक्कसँग एक्लै पनि यही बाटो भएर विद्यालय जानेआउने गर्थिन् । विद्यालय जाने बाटो बदलेका उनी अचेल सो प...
आलोचनाको घेराबाट माथि उठ्न नेपालको साथ माग्दै सुकी
शीतलपाटीन्युज डटकम। एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागी हुन आएकी म्यानमारकी विदेश मन्त्री आङसाङ सुकीले विश्वमञ्चमा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न पहल गरेकी छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनले पनि विश्वमञ्चमा नेपालको साथ खोजेका छन्। उनीहरूले औ...
काठमाडौंका ८० प्रतिशत शिक्षक हाजिर गर्दै, टाप ठोक्दै !
शीतलपाटीन्युज डटकम। सरकारी कर्मचारीबीच बोलीचालीमा एउटा शब्द प्रचलित छ– हाटा । हाटा अर्थात् हाजिर गर्दै, टाप ठोक्दै । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ । बोलीचालीमा मात्रै होइन, व्यवहारमा समेत कर्मचारीले हाटा गर्छन् । काठमाडौं महानगरमा त ८० प्रतिशत शिक्षक हाटा पाइएका छन् ।...